Mbata: Mee atụmatụ, Ree ma jigide na ire ere | Martech Zone
Tuesday, February 25, 2014 Tuesday, February 25, 2014 Douglas Karr
Ntinye na-enye oru-ele mmekọrịta na ahịa na atụmanya ime data chụpụrụ mkpebi na omume ka mma ahịa usoro. Introhive na ejikọ email, akaụntụ mmekọrịta, na data mkpanaka iji nakọta, akara ma nye data eme ihe iji bulie ahịa maka atụmanya na ndị ahịa.
Introhive na-enye ikpo okwu dị mkpa iji
plan - mata, kenye ma nyochaa njikọ azụmaahịa gị nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na ọrụ.
ere - ịmebata ndị na-ere ahịa ahịa site na mmekọrịta dị ugbu a na akaụntụ ha lekwasịrị anya. Jikọọ na ahịa akpaaka nyiwe akara na Hazie.
Weghachite - chọpụta ihe ndekọ dị ize ndụ dabere na akụkọ na-egosi mmekọrịta mmekọrịta karịa oge maka onye ahịa ọ bụla.
Hazie - Gwakọta na na-akụ gị isi ka hazie mmekọrịta scores.
Salesforce na-eweta data Introhive bara ụba na akara na akaụntụ Salesforce, kọntaktị, na ndu.
Introhive bụ ngwa SaaS dị na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla ma enwere ngwa ọdịnala maka iOS, Android, na Blackberry.
Tags: okpokorointrohivendu akaraakụrụngwa ahịamgbagharandị ahịana-elekọta mmadụ na-ere